10 sano oo geeridii Qadaafi ka danbeeyey ammaanka Liibiya wuxuu ku jira halis - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Wararka 10 sano oo geeridii Qadaafi ka danbeeyey ammaanka Liibiya wuxuu ku...
10 sano oo geeridii Qadaafi ka danbeeyey ammaanka Liibiya wuxuu ku jira halis
Toban sano oo laga joogo markii Moamer Kadhafi ay dileen fallaagada Liibiya, waddanka Waqooyiga Afrika ayaa weli la halgamaya sidii uu uga soo bixi lahaa rabshadaha ka dhashay afgembigii dawladooda iyo dilkii hogaamiyahoodii.
Xabbad-joojin hal sano socotay iyo geeddi-socod nabadeed oo ay Qaramada Midoobay hoggaaminayso ayaa si dirqi ah uga soo baxay kala qaybsanaanta qotada dheer, laakiin falanqeeyayaasha ayaa rajaynaya in doorashada soo socota ay xallin doonto xiisadda.
Qaddaafi ayaa 42 sano ku maamulayay Libya gacan bir ah ka dib afgambi 1969-kii lagu bedelay boqortooyadii, isaga oo isu muujiyey inuu yahay kacaan, Carab iyo geesi Afrikaan ah halka uu si naxariis darro ah ula dhaqmay dhammaan mucaaradkiisii.
Tan iyo dhimashadii Qaddaafi, Liibiya waxay u jabtay siyaasadaha gobolka iyo fikradaha caalamka, iyada oo ay ku jiraan malayshiyo u eg maafiya iyo taageerayaashooda shisheeye oo u tartamaya gacan ku haynta dalka saliidda hodanka ku ah.
“Sababta aan ugu dhagannahay nidaamkii hore ayaa ah in dhacdooyinkii Febraayo 2011 (bilowgii kacdoonka) ay keeneen oo keliya dagaallo, burbur, kala qaybsanaan iyo weerarro ka dhan ah madaxbannaanida dalkeenna,” ayuu yiri Fatxi al-Axmar, oo ah injineer.
Xabbad-joojinta lagu heshiiyey Oktoobar 2020 ayaa sii socota oo Dawladda Midnimada Qaranku waxay u muuqataa inay tahay dawladda keliya ee Liibiya.
Codbixinta madaxweynenimada ayaa loo qoondeeyay 24ka Diseembar iyo doorashooyinka sharci dejinta oo Janaayo la qaban doono.
“Mowqifkeenu waa sidiisii ​​hore, waxaan sugeynaa in meesha laga saaro xayiraadaha siyaasadeed iyo kuwa sharci ee saaran Seif al-Islam, si aan u taageerno,” ayuu yidhi wariye Axmed Abuu Hriba.
Codbixinta soo socota ayaa u muuqata mid loogu talo galay dalab uu dalbaday ninka xoogga badan ee militariga Khalifa Haftar waxaana loo gudbiyay tallaabo dad badan oo ka soo horjeedaa ay sheegeen in la baal maray hannaankii saxda ahaa.
Previous articleMarooko ayaa sheegtay in la badbaadiyay in ka badan 300 oo muhaajiriin ah oo ku sii jeeday Yurub
Next articleHal qof ayaa looga shakisan yahay inuu u dhintay Ebola waddanka DRC